Manainga lasibatry - China Ningbo Sine
Fitsipiky ny Model PML maharitra Magnet mpanandratra manana andriamby mahery lalana novokarin'ny NdFeB andriamby fitaovana. Tamin'ny sy Off ny andriamby dia fehezin'ny lalana avy amin'ny fihodinana ny boky fampianarana PML tahony andriamby maharitra lifters manana andriamby toy ny hery, sy ny fahefana fanandratako dia tsy hampihena.
In Loading sy mampidina entana avy, ny mpanandratra afaka hoist vy / vy vato, cylinders sy ny hafa teo andriamby fitaovana ho an'ny linkage ny fifandraisana. Dia tena mety ho fampiharana amin'ny Loading, mampidina entana avy, ary mampihetsi-po. Andriamby maharitra PML lifters no tsara indrindra ho an'ny orinasa fanandratako toerana, seranan-tsambon'i, trano fanatobiana entana ary ny fitaterana.
Nahay kely ary narafitra, mora ho an'ny fampiharana, andriamby mahery Tia hery sy azo antoka amin'ny fikirakirana.
Open sy Download vokatra catalogue ny andriamby mpanandratra
Previous: andriamby Chuck
Manaraka: vilany avoakan'ireo andriamby,